Ndị uwe ojii na ndị isi Nominee
Na mgbakwunye na Mmemme Office (nke a makwaara dị ka Mmemme poratelọ Ọrụ )lọ Ọrụ), Companieslọ Ọrụ Incorporated na-enye ọrụ pụrụ iche iji nye gị BIG ọzọ nke nzuzo na nchedo. Iji kpuchido ndị ahịa anyị ka ọ ghara ileghara anya nke anya, ndị ụlọ ọrụ ebighi ebi nyere anyị Ọrụ Nominee. Mgbe ị debanyere aha maka ọrụ a, anyị ga-ekenye otu n'ime ndị anyị na ha na-arụ ọrụ ka ọ nọrọchitere gị dịka ndị isi na ndị isi nke ụlọ ọrụ gị. Ọrụ a dị maka Nevada na Wyoming Corporations, ma a na-enye ya naanị $ 500 kwa afọ. Onye a hoputara gbakwunyere na Shieldkpụrụ Iwu Shield Shield ebe onye ahọpụtara anyị na-enyere aka na usoro ụlọ ọrụ bụ naanị $ 1995 kwa afọ.
Mgbe ahọrọ onye ọka iwu na-ahọpụta ma ọ bụ onye ntụzi, gị (onye nwe ọtụtụ ngwaahịa) nwere ike ịnwe isi na ụlọ ọrụ gị. Na-ejide ikike ịbịanye aka niile gbasara akaụntụ ego ọ bụla, ị na-enwe ikike ịbanye na ụdị ego ma ọ bụ mgbazinye ụlọ ọrụ ọ bụla na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị họrọ. Na mgbakwunye, dị ka ekwuputere, ị na-enwe ikike mbinye aka niile n'ihe ndekọ ụlọ akụ - ndị ọrụ ụlọ ọrụ akpọrọ aha ndị ụlọ ọrụ anaghị emetụ ego ọ bụla metụtara ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na ha enweghị ikike ma ọ bụ ikike mbinye aka na akaụntụ ụlọ ọrụ ọ bụla. Ha na-echekwa nzuzo gị nanị site na imezu ihe iwu chọrọ ka ụlọ ọrụ nwee otu onye ọrụ ma ọ bụ karịa depụtara.
Na -emekarị, ndị ahịa anyị na-enye iwu maka Mmemme ,lọ Ọrụ, Officelọ Ọrụ Ọfịs na Nominee ọnụ dị ka ngwugwu. Iji guzosie ike na Mmemme poratelọ Ọrụ andlọ Ọrụ na Ọrụ Nominee, gaa na etiti usoro nchekwa anyị.